Drafitra fitsinjaram-pahefana momba ny fizahantany ao Thailand momba ny fizahantany 2018
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Drafitra fitsinjaram-pahefana momba ny fizahantany ao Thailand momba ny fizahantany 2018
Vao tsy ela akory izay ny Fahefan'ny Fizahan-tany any Thailand (TAT) dia nanao ny drafitra TAT Action Plan ho an'ny taona 2018, izay manarona ny fizahantany iraisam-pirenena sy anatiny. Ny drafitry ny varotra TAT 2018 dia natao hametrahana ny tanjona amin'ny famoronana fidiram-bola sy hampitomboana ny fahatongavan'ireo mpitsidika, hampiroborobo ny hevitra vaovao ary hanaraka ny fandaharam-pivoaran'ny Thailand 4.0 amin'ny alàlan'ny filozofia Economy Sufficiency, ary koa ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany izay mitazona ny fifandanjana eo amin'ny toekarena, ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana. Ny paikady rehetra dia mifanaraka amin'ny drafitra fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy faha-12 ary ny drafitra fampandrosoana ny fizahantany nasionaly faha-2.
Satria heverina ho taona sarotra ny 2017, dia nanao izay ezaka rehetra vitany ny TAT amin'ny marketing amin'ny fizahantany mba hampirisihana ny toekarem-pirenena. Hetsika maro; toy ny, Village to the World, Creative Thailand ary The Link dia noforonina mba hanasongadinana ny traikefa Thai eo an-toerana. Nahomby izany satria nitombo be ny isan'ireo mpitsidika sy mpitsidika voalohany. Noho izany, ny TAT dia hiasa hatrany amin'ity fotokevitra ity ho an'ny drafitra hetsika hataony amin'ny taona 2018.
Andriamatoa Yuthasak Supasorn, governoran'ny TAT dia nilaza fa "hampiasa fizahan-tany ny TAT hampiroboroboana ny fampandrosoana maharitra miaraka amin'ny fiarahamonina ho mpahazo tombony farany. Mino izahay fa io no hanokatra ny lalana ho an'i Thailandy ho toerana tian'ny mpivahiny iraisam-pirenena. ”
Ho lasibatra mandritra ny 12 volana amin'ny taom-piasana 2018, nanomboka ny volana Oktobra 2017, ny fizarana mpanjifa-tsena dia vita tamin'ny fivoriana TAT Action Plan isan-taona natao teo anelanelan'ny 11-14 Jolay 2017.
Ho an'ny paikadin'ny drafitra marketing iraisampirenena, ny TAT dia nampisaraka ny mpanjifa kendrena manerantany manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny mpamerimberina, zokiolona ka hatramin'ny mpitia fanatanjahan-tena. Ny TAT koa dia hanasongadina ny tsena misy azy toy ny, Weddings and Honeymoons, and Ladies, ary koa hanohy hamorona marika ho toy ny toerana avo lenta sy Luxury Travel.
Ny fizahantany Gastronomy dia hifantohana bebe kokoa, izay heverina ho ampahany lehibe amin'ny dia amin'ny alàlan'ny traikefa eo an-toerana. Izy io koa dia iray amin'ireo fitaovana hampiroborobo ny fampandrosoana ny harinkarem-pirenena amin'ny alàlan'ny fampidirana lanja amin'ny vokatra sy serivisy miorina amin'ny kolontsaina sy fomba fiaina Thai tokana. Ny sasany amin'ireo hetsika misongadina dia ny fisokafan'ny Michelin Guidebook Bangkok ary Thailand no hampiantrano ny Forum Iraisam-pirenena UNWTO faha-4 momba ny fizahan-tany Gastronomy.
Ny paikadin'ny fifandraisana amin'ny tsena iraisam-pirenena dia mbola hampiasa ny "Amazing Thailand", izay teny filam-barotra malaza sy eken'ny besinimaro efa ho 20 taona izao. Mbola hampiasa ny “Discover Amazing Stories in Amazing Thailand” ny TAT.
Amin'ny taona 2018, ny TAT dia hanova kely ny zoro marketing misy foto-kevitra vaovao hoe "Misokatra amin'ny endrika vaovao any Thailand". Ny fotokevitra dia hampitombo ny tsy manam-paharoa traikefa eo an-toerana Thailandey ho an-tapitrisany shades of Thailand. Hanome lalindalina kokoa ny fampisehoana ny fizahan-tany any Thailand io, hampitombo ny orinasa ho an'ireo mpilalao sehatry ny fizahan-tany eny ifotony, ary hanatsara ny endrik'ilay firenena ho toy ny tany misy fahasamihafana mahatalanjona mendrika ho hita bebe kokoa.
Ho an'ny paikady ho an'ny tsena anatiny, ny TAT dia hifantoka amin'ny fampitomboana ny fahaizan'ny fivezivezena ataon'ny vondron'olona mety ho antitra (Silver Age, Millennial, Families, Gen-Y, Multi-Generation, and Ladies), faritra malaza decongest, hampiroborobo ny dia mandritra ny herinandro, manamafy ny fiaraha-monina ary mitahiry ny tontolo iainana.
Ny fampielezana ny varotra anatiny amin'ny taona 2018, dia hanatsara ny teny filamatra, "Unique Thai Local Experience". Ny fotokevitra dia hampiroborobo ny fizahan-tany ary hiteraka soatoavina eo amin'ny vahoaka Thai handresena lahatra azy ireo hankafy fitsangatsanganana any Thailand ary handeha lalindalina kokoa amin'ny fikatsahana traikefa tsy hay hadinoina.
Ohatra vitsivitsy amin'ny fandraisana andraikitra vaovao ho an'ny varotra ao an-tokantrano ataon'ny TAT ny fananganana fahatsiarovan-tena momba ny fitantanana ny fako mandritra ny fety eo an-toerana, ny fampiroboroboana ny gastronomy mamorona, ary ny fananganana tambajotra fizahan-tany ho mailaka amin'ny tontolo iainana.
Hoy Andriamatoa Yuthasak: “Mazava fa tapitra ny taonan'ny varotra varotra. Ny ho avy dia mitoetra amin'ny fampielezan-kevitra mivarotra fatratra, izay afaka mitondra valiny azo refesina. Ireo dia hanampy antsika hitazona ny fisian'ny marika matanjaka, hanatsara ny fahombiazan'ny volan'ny marketing, hiresahana ny fizaran-toetran'ny vanim-potoana, ny toerana malaza indrindra ary hametraka fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpiara-miombon'antoka izay mety ahitana orinasa indostrialy sy vondrom-piarahamonina eo an-toerana izay afaka mandray anjara amin'ny fahombiazan'ny tanjontsika. . "
Ny isan'ny mpitsidika nanomboka ny volana Janoary - Jona 2017, dia nahatratra 17 tapitrisa namorona fidiram-bola 876 miliara Baht izay ny tsenan'i Sina no mpamokatra herinaratra voalohany narahin'i Russia sy Malaysia. Noho ny fahatsapana ny maha-zava-dehibe ny fizahan-tany ho an'ny toekarem-pirenena, ny governemanta Thai Thai dia nametraka fitomboana tsy latsaky ny 8 isan-jato amin'ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany ho an'ny taona 2018.